Bhuku rako raunofambisa rwendo rwekufamba kubva kuAward Winning Tour Operator muHodisha | Call + + 91-993.702.7574
Namaskaar!... uye kukwazisa kubva kunyika yaIshe Jagannath.Bhubaneswar - guta re temberi; guta guru Odisha ndiyo mai vangu. Odisha, yakagadziriswa netsika yemararamiro, matongerwo emagariro uye nhaka yakavanzika inoitika kuva mweya weIndia. Iyi maTemberi akaisvonaka, zviratidzo zvidhori, mahombekombe anoyevedza, anouya wildlife sanctuaries uye mapaki emarudzi, zvisikwa zvinokambaira zvisikwa paChilika lake zvinowedzera kune vashanyi vakawanda nguva dzose. Ndaida kuratidzira uhu hwakanaka kunyika yose, uye isu tiri umwe weMutambo Wakaisvonaka Mukushanda Opera mu Odisha pakushumira kwako.
Ndakanga ndakatarisana nehuwandu kubva pauduku hwangu uye matambudziko anonzwisisika. Izvi zvakandibatsira kuti ndive nekambani iyi yebhizimisi uye ndiongorore kuzadzikisa zvizere zvese izvo zvinogona kukurudzira chaizvo vezororo kana kuungana kwevashanyi. Uye isu tinogona kuzvikudza tisingatauri kuti, mumakore mashomanana, nemabasa akawanda uye zvakaoma isu tiri iye zvino Mutambo Wekutsvaga Kushanda muOdhaisha. Ndiyo nzira iyo ini "Dream Child" yangu Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd yakauya kuzoona. Ndizvo zvandakaona uye kubatanidzwa mune iyi indasitiri, ndine simba rokuunganidza boka rakanyanya kugadzirirwa uye vashandi vane ruzivo vanozoenda zvakanyanyisa kudarika zvavanofanira kuita kuti vape vashanyi vedu nevanonyanya kufambira mberi.
Nhasi takaparadzira mapapiro edu kuenda kuNew Delhi uye kuColkata uye tiri kushanda mumaseresi akasiyana-siyana eIndia tichida zvakanaka nekubatsirwa neDhipatimendi reZvakatori, Hurumende yeOudisha neHurumende yeIndia. Kuve mubayiro wekushanda Opera muOnisha, chirevo chedu chikuru ndechokupa vafambi nguva yeupenyu, ruzivo rwakakwana rwezviyeuchidzo uye zviso zvinofadza.
Nezvo, ndinoda kuparidzira kwakagamuchirwa kune umwe neumwe kuti ashanyire nyika yedu inoshamisa uye inonakidza uye kusangana nehupenzi husina maturo. Ndiko kutarisira kwangu kwechokwadi kuti vaenzi vanoedza kuongorora kufungisisa zvisikwa nemafuta emafuta eNdiya. Ndinoda kukuvimbisai kuti ruzivo rwavo rucharamba ruchiri mumangariro avo kwenguva yakare.
Izvo zvose zvakanakisisa kwamuri mose uye tarisirai kugamuchira iwe muOdhaisha.
MD, Sandwende Pebbles Tours